Ego ole ka Digital Marketing dabeere na SEO?
Ị nwetụla mgbe ị na-eche otú SEO si emetụta ọwa ahịa ahịa dijitalụ? Ị enwetabeghị azịza doro anya? Enweghị nchekasị. Taa, anyị ga-akọwa gị n'ụzọ zuru ezu na ole ahịa weebụ na-adabere na njikarịcha search engine.
Dị ka ị maaraworị, SEO agbanweela ọtụtụ n'ime afọ ole na ole gara aga. Ọ malitere ma dị ukwuu karịa usoro nchịkọta nri nke na-adịghị ike na nke ochie na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti afọ ndị 1990. Ka ọ na-erule afọ 2005, ọbụna obere ụlọ ọrụ na mmalite malitere ịmalite mbupụ SEO ndị kwere nkwa na ha ga-enyere aka mụbaa okporo ụzọ na ahịa.
Enweghị ihe ọ bụla na na 2017 SEO ka na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite azụmahịa n'ịntanetị. Usoro nyocha njirimara search engine na-eweta mmeri ma ọ bụrụ na emejuputara ya. Ya mere, ka anyị banyekwuo n'isiokwu a ma hụ ọtụtụ ahịa dijitalụ na-adabere na SEO.
SEO Collaborations dị na Team Marketing Team
Ụbọchị ndị a, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na ndị na-emepụta ihe na weebụ gụnyere SEO ụzọ bụ isi na usoro ha dijitalụ. Nke ahụ na-eme n'ihi na oge a SEO ụzọ kachasị mma ma dịka karịa mgbe ọ bụla. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ na-azụ ahịa ahịa n'ụbọchị ọ bụla. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọzụzụ ndị a:
Strategic Content: Ọdịnaya bụ eze, ihe bara uru SEO, ngwá ọrụ dị ike - kpọọ ya ihe ọ bụla ị chọrọ. Ọ bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na ihe ka ọtụtụ n'ime atụmatụ ego SEO dabeere na ihe okike. Ịmepụta usoro ịme ihe ịga nke ọma na SEO nwere ike ime ka ọ gbanwee ọ bụghị naanị mgbanwe ma nwee nkwenye.
Social Media Marketing: A na-atụ aro ka a jikọta usoro mgbasa ozi gị na usoro SEO iji nweta ihe dị iche iche nke SEO uru. Njikwa mmadụ zuru okè maka iwetara azụlinks na ala gị. Kedu ihe ọzọ, ha na-egosi ma atụmatụ nke ọdịnaya gị na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ chọrọ nwelite.
Search Search: Site na ijikọta Google Analytics na SEO, ị nwere ike ịchọta okwu dị oké ọnụ ahịa, si otú a nweta usoro okporo ụzọ. Ndị ọrụ nchịkwa a na-akwụ ụgwọ nwere ike imekorita ndị òtù SEO site na ịmepụta ọtụtụ ihe, tinyere atụmatụ isiokwu, ibute peeji, mkparịta ụka nkekọrịta mmekọrịta na akara na-aga n'ihu.
Mmekọrịta Ọha: Nchịkwa aha njirimara bụ nzọụkwụ dị mkpa dị mkpa n'ime usoro SEO gị. Ndị òtù PR nwere ike ịba uru dị ukwuu site n'iji SEO na-emekọ ihe: Mkpokọta egwu nwere ike ịme ma abụọ: ntanetị ntanetị na nyocha ọchụchọ.
Ntụgharị: Ijikọta usoro ntụgharị na SEO nwere ike ime ka mmepụta ihe ọganihu. Ọ bụrụ na ị kwadoro ahụmịhe kachasị mma nke ọrụ na njem ọhụụ kwesịrị ekwesị, ị ga-eweta ndị ọrụ bara uru na ebe nrụọrụ weebụ gị. Tụlee ịgụ map ndị ọkụ iji ghọta ndị ọrụ gị nke ọma. Ọzọkwa, nwalee UI gị mgbe niile.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, SEO na-emekọ ọnụ na ọtụtụ ịdọ aka ná ntị n'ime ahịa dijitalụ.
SEO bụ ihe na-agbanwe agbanwe: kwa ụbọchị anyị na-ahụ ohere ọhụụ ọhụrụ. Ihe kachasị mma i nwere ike ime iji mee ka ị gbanwee nke ọma bụ ịkọwapụta na nkwekọrịta gị dijitalụ. Mee ka ha mara ihe ị na-eme, kọọrọ ha banyere nzọụkwụ gị ndị ọzọ, kọọrọ gị SEO echiche na ndị ọkachamara dijitalụ hụ ihe na-eme na otu ọnwa Source . Ikekwe, ị ga-achọ ihe ndị dị otú ahụ na mmekọrịta!